MY SOMALI CULTURE: Hidiyo dhaqanka iyo Xaragada cusub
Inkastoo hidiyo dhaqankii sidii uu ahaa weli loo jecel yahay, hadana waxa soo kordhaya habab kala duwan oo dhalinta Soomaaliyeed u toshaan una xidhaan hidiyo dhaqanka. Taasi oo badi gabdhaha soomaaliyeed aad ugu dadaalaan inay ku soo bandhigaan dookhooda shakhsi, iyo casriyeynta dharkooda iyagoo aan ka tageynin dhaqankeena suuban.
Fanaanada weyn ee aadka loo jecel yahay Shamsa Foot, ayaa iyana si xad dhaaf ah iskugu howsha qurxinta iyo soo bandhigida dhaqankeena. Iyadoo dhalinyaro badani aad u xiiseeyaana, la odhan karo way soo nooleysiisey xidhashada hidaha iyo dhaqanka.
waxaad mar walba arkaysaa iyadoo, ku dedan, jeeni qaaran amaba sidata dharkeena quruxda badan.
Ha noqoto, alendi ama saddex qayde, mid wabla ka filo Shamso, iyadoo waliba ay ka muuqadaan qurux iyo hanaankii hablihii hore. Anaguna waxaanu hawada u marinaynaa hambalyo gaara u diraynaa Shamso, waxanan leenahay ku raaxayso dhaqankaaga.
Posted by Milgo at 7:09 PM